अंग्रेजी भिडियो च्याट।
शिष्टाचार 00 00००3 आज धेरै मानिसहरूलाई भिडियो च्याट रूसी रूलेका सम्भावनाहरूको बारेमा थाहा छ। अन्य व्यक्तिहरू, देशहरू र महादेशहरूबाट: अन्य व्यक्तिहरूसँग नि: शुल्क कुराकानी गर्न अझै धेरै व्यक्तिहरू दिनको कम्तिमा एक पटक यो स्रोत पहुँच गर्न कोशिस गर्छन्। भिडियो च्याट रूसी रूले सुविधाजनक छ किनकि सबैजना यस संसाधनमा मुख्यतया रूसी बोल्छन्। अन्यथा, त्यहाँ कुनै प्रतिबन्धहरू छैनन्। हालसालै, रूसी रूले भिडियो च्याट अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले यो भिडियो च्याट रूसी रूलेमा शिष्टाचारको बारेमा कुरा गर्ने समय हो। यो प्रश्न धेरै netizens चिन्तित। यस लेखले निम्न मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ: 00 00००4
के कुरा च्याट भिडियो रूसी "रूसी रूले"
मा छ 00 00००00 तपाईंले भिडियो च्याटमा शिष्टाचार पछ्याउन किन आवश्यक पर्दछ भिडियो च्याट रूसी रूलेमा ti 00 ०००7 प्रकारका शिष्टाचार
भिडियो च्याट रूसी रूलेट
मा व्यवहारको आधारभूत नियमहरू
कसरी भिडियो च्याट रूसी रूलेमा एक महान कुराकानीवादी बन्ने 00 00००3A अब संक्षेपमा रूसी रूले भिडियो च्याटमा सबै शिष्टाचार पोइन्टहरू पार गरौं। पहिलो प्रश्न:
बाट सुरू गरौं
भिडियो च्याट रूसी रूलेटमा शिष्टाचार के हो? 00 00 ०003 सबैलाई थाहा छ कि शिष्टाचार केही खास अवस्थाहरू र केही स्थानहरूमा आचरणको एक नियम हो। यो इन्टरनेट मा समान हुनेछ। इन्टर्नेट र भिडियो च्याटमा शिष्टाचार व्यवहारको नियम हो, साथ साथै उपस्थिति, बेहोरा, तर केवल पहिले नै अनलाइन। इन्टरनेट शिष्टाचार साधारण शिष्टाचार भन्दा धेरै फरक छैन। तर अझै भिन्नताहरू छन्। त्यो हामी के बारे कुरा गर्नेछौं कुराकानी रूसी रूलेटमा शिष्टाचारको छलफलको बखत। अधिक र अधिक व्यक्तिहरू नयाँ साथीहरू, वा मित्रहरू, इन्टरनेटमा बनाउन चाहन्छन्। भिडियो च्याटहरू यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ। आज सबैजना कुनै पनि भिडियो च्याटमा जान सक्छन् र कुरा गर्न कसैलाई पत्ता लगाउन सक्छन्। भिडियो च्याट रूलेट केहि सुविधाहरूमा साधारण भिडियो च्याटभन्दा फरक छ: 00 00००4 00 00००7 वार्तालाप पूर्ण अनियमितको प्रस्ताव गरियो 00 00००7 तपाईं कुनै पनि समयमा कुराकानी रोक्न सक्नुहुन्छ र अन्य व्यक्तिहरूसँग च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। 00 00००00 लाई च्याट गर्न सुरू गर्न आवश्यक पर्दैन 00 00००7 तपाईं एक सत्रमा धेरै व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
यो ती सुविधाहरू हुन् जसले भिडियो च्याट रूलेटमा सञ्चारको बखत व्यवहारका नियमहरू डिक्टेट गर्दछन्। विशेष गरी भिडियो च्याट रूसी रूलेमा। अनलाइन कुराकानीको बखत आचरणका नियमहरू सबैका लागि सरल र बुझ्ने हुन्छन्। जे होस्, असफल बिना उनीहरूको बारेमा जान्न लायक छ। र तपाईले यी नियमहरू छिटो सिक्नुहुनेछ, अन्य वार्तालापहरूसँग कुराकानी त्यति सहज र प्रसन्न हुनेछ। एक अन्तर्वार्ताका रूपमा तपाईं अधिक लाभ हुनेछ।यो पहिले नै खराब शिष्टाचारको सूचक हुन सक्छ। र यसको विपरित, यदि भिडियो च्याट रूसी रूलेमा नेटवर्कमा व्यवहारको नियमलाई सम्मान गरिएको छ भने खुशीको साथ कुराकानी गर्नेहरूले तपाईंसँग अनलाइन बैठकहरू हेर्नको लागि प्रस्ताव गर्छन्। यो सरल सत्य हो: यदि तपाई शिष्टाचार अवलोकन गर्नुहुन्छ, भने सञ्चार प्रक्रियाबाट नै ठूलो आनन्द ल्याउँदछ। र एक व्यक्ति जो एक अन्यलाई वार्तालापको रूपमा मनपर्दछ नयाँ साथीहरू वा परिचित हुन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। वा केवल रमाइलोको लागि च्याट गर्नुहोस्। 00 00००। 00 00००3 यदि तपाईंले भिडियो च्याट रूलेमा शिष्टाचार अवलोकन गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईं सजिलैसँग अन्य कुराकानीहरूबाट धेरै लाभहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यो पनि सम्भाव्य छोटो समयमा संचारको लागि अयोग्य उम्मेदवारहरू फिल्टर गर्न सम्भव छ। यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि मध्यस्थहरूले गुनासोहरू जाँच्दछन् र घडी वरिपरि प्रतिबन्धित गर्छन्, वा राम्रो मान्छे जसले नियम अनुसार व्यवहार गर्दैनन्। यदि तपाईंले भिडियो च्याट रूलेटमा अपनाएको शिष्टाचार अवलोकन गर्नुभएन भने, तिनीहरूले तपाईंको विरुद्ध गुनासो लेख्न सक्छन् र यस मामलामा केहि समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउने उच्च सम्भावना हुनेछ। यदि गुनासो धेरै पटक प्राप्त भयो भने, तब प्रतिबन्धको वास्तविक संभावना सदाको लागि देखा पर्दछ। यो एक मुख्य कारण र प्रश्नको उत्तर हुन सक्छ: भिडियो रूले शिष्टाचार किन पालन गर्नु हो? यो, अवश्य पनि, उत्तर हो, तर केवल एक मात्र होइन। सम्भावित प्रतिबन्धको अतिरिक्त, शिष्टाचारलाई सम्मान गरेन भने त्यहाँ अन्य बेफाइदाहरू पनि छन्। उदाहरण को लागी, तपाईले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्तिको मनपर्‍यो र उनी संग कुरा गर्न जारी राख्न चाहानुहुन्छ, परिस्थिति हुन सक्छ, तर यो कसरी गर्ने थाहा छैन। यो शिष्टाचारको तत्व पनि हुनेछ। सबै शिष्टाचार संचारको नियम हो। र संचारको लागि व्यक्तिगत कोठा कसरी थप्ने भनेर जान्न शिष्टाचारको अंश पनि हुन सक्छ। यदि वार्तालाप धेरै समयको लागि लजालु र मौन छ, तब उसले शिष्टाचारको नियम पनि उल्ल
00 00००3 आज धेरै मानिसहरूलाई भिडियो च्याट रूसी रूलेका सम्भावनाहरूको बारेमा थाहा छ। अन्य व्यक्तिहरू, देशहरू र महादेशहरूबाट: अन्य व्यक्तिहरूसँग नि: शुल्क कुराकानी गर्न अझै धेरै व्यक्तिहरू दिनको कम्तिमा एक पटक यो स्रोत पहुँच गर्न कोशिस गर्छन्। भिडियो च्याट रूसी रूले सुविधाजनक छ किनकि सबैजना यस संसाधनमा मुख्यतया रूसी बोल्छन्। अन्यथा, त्यहाँ कुनै प्रतिबन्धहरू छैनन्।
हालसालै, रूसी रूले भिडियो च्याट अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले यो भिडियो च्याट रूसी रूलेमा शिष्टाचारको बारेमा कुरा गर्ने समय हो। यो प्रश्न धेरै netizens चिन्तित। यस लेखले निम्न मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ: 00 00००4
00 00००00 तपाईंले भिडियो च्याटमा शिष्टाचार पछ्याउन किन आवश्यक पर्दछ
भिडियो च्याट रूसी रूलेमा ti 00 ०००7 प्रकारका शिष्टाचार
कसरी भिडियो च्याट रूसी रूलेमा एक महान कुराकानीवादी बन्ने
00 00००3A अब संक्षेपमा रूसी रूले भिडियो च्याटमा सबै शिष्टाचार पोइन्टहरू पार गरौं। पहिलो प्रश्न:
भिडियो च्याट रूसी रूलेटमा शिष्टाचार के हो?
00 00 ०003 सबैलाई थाहा छ कि शिष्टाचार केही खास अवस्थाहरू र केही स्थानहरूमा आचरणको एक नियम हो। यो इन्टरनेट मा समान हुनेछ। इन्टर्नेट र भिडियो च्याटमा शिष्टाचार व्यवहारको नियम हो, साथ साथै उपस्थिति, बेहोरा, तर केवल पहिले नै अनलाइन। इन्टरनेट शिष्टाचार साधारण शिष्टाचार भन्दा धेरै फरक छैन। तर अझै भिन्नताहरू छन्। त्यो हामी के बारे कुरा गर्नेछौं कुराकानी रूसी रूलेटमा शिष्टाचारको छलफलको बखत। अधिक र अधिक व्यक्तिहरू नयाँ साथीहरू, वा मित्रहरू, इन्टरनेटमा बनाउन चाहन्छन्। भिडियो च्याटहरू यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ।
आज सबैजना कुनै पनि भिडियो च्याटमा जान सक्छन् र कुरा गर्न कसैलाई पत्ता लगाउन सक्छन्। भिडियो च्याट रूलेट केहि सुविधाहरूमा साधारण भिडियो च्याटभन्दा फरक छ: 00 00००4
00 00००7 वार्तालाप पूर्ण अनियमितको प्रस्ताव गरियो
00 00००7 तपाईं कुनै पनि समयमा कुराकानी रोक्न सक्नुहुन्छ र अन्य व्यक्तिहरूसँग च्याट गर्न सक्नुहुनेछ।
00 00००00 लाई च्याट गर्न सुरू गर्न आवश्यक पर्दैन
00 00००7 तपाईं एक सत्रमा धेरै व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
यो ती सुविधाहरू हुन् जसले भिडियो च्याट रूलेटमा सञ्चारको बखत व्यवहारका नियमहरू डिक्टेट गर्दछन्। विशेष गरी भिडियो च्याट रूसी रूलेमा। अनलाइन कुराकानीको बखत आचरणका नियमहरू सबैका लागि सरल र बुझ्ने हुन्छन्। जे होस्, असफल बिना उनीहरूको बारेमा जान्न लायक छ। र तपाईले यी नियमहरू छिटो सिक्नुहुनेछ, अन्य वार्तालापहरूसँग कुराकानी त्यति सहज र प्रसन्न हुनेछ। एक अन्तर्वार्ताका रूपमा तपाईं अधिक लाभ हुनेछ।यो पहिले नै खराब शिष्टाचारको सूचक हुन सक्छ। र यसको विपरित, यदि भिडियो च्याट रूसी रूलेमा नेटवर्कमा व्यवहारको नियमलाई सम्मान गरिएको छ भने खुशीको साथ कुराकानी गर्नेहरूले तपाईंसँग अनलाइन बैठकहरू हेर्नको लागि प्रस्ताव गर्छन्। यो सरल सत्य हो: यदि तपाई शिष्टाचार अवलोकन गर्नुहुन्छ, भने सञ्चार प्रक्रियाबाट नै ठूलो आनन्द ल्याउँदछ। र एक व्यक्ति जो एक अन्यलाई वार्तालापको रूपमा मनपर्दछ नयाँ साथीहरू वा परिचित हुन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। वा केवल रमाइलोको लागि च्याट गर्नुहोस्। 00 00००।
00 00००3 यदि तपाईंले भिडियो च्याट रूलेमा शिष्टाचार अवलोकन गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईं सजिलैसँग अन्य कुराकानीहरूबाट धेरै लाभहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यो पनि सम्भाव्य छोटो समयमा संचारको लागि अयोग्य उम्मेदवारहरू फिल्टर गर्न सम्भव छ। यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि मध्यस्थहरूले गुनासोहरू जाँच्दछन् र घडी वरिपरि प्रतिबन्धित गर्छन्, वा राम्रो मान्छे जसले नियम अनुसार व्यवहार गर्दैनन्। यदि तपाईंले भिडियो च्याट रूलेटमा अपनाएको शिष्टाचार अवलोकन गर्नुभएन भने, तिनीहरूले तपाईंको विरुद्ध गुनासो लेख्न सक्छन् र यस मामलामा केहि समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउने उच्च सम्भावना हुनेछ। यदि गुनासो धेरै पटक प्राप्त भयो भने, तब प्रतिबन्धको वास्तविक संभावना सदाको लागि देखा पर्दछ।
यो एक मुख्य कारण र प्रश्नको उत्तर हुन सक्छ: भिडियो रूले शिष्टाचार किन पालन गर्नु हो?
यो, अवश्य पनि, उत्तर हो, तर केवल एक मात्र होइन। सम्भावित प्रतिबन्धको अतिरिक्त, शिष्टाचारलाई सम्मान गरेन भने त्यहाँ अन्य बेफाइदाहरू पनि छन्। उदाहरण को लागी, तपाईले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्तिको मनपर्‍यो र उनी संग कुरा गर्न जारी राख्न चाहानुहुन्छ, परिस्थिति हुन सक्छ, तर यो कसरी गर्ने थाहा छैन। यो शिष्टाचारको तत्व पनि हुनेछ। सबै शिष्टाचार संचारको नियम हो। र संचारको लागि व्यक्तिगत कोठा कसरी थप्ने भनेर जान्न शिष्टाचारको अंश पनि हुन सक्छ।
यदि वार्तालाप धेरै समयको लागि लजालु र मौन छ, तब उसले शिष्टाचारको नियम पनि उल्ल .्घन गर्दछ। जे भए पनि कुनै पनि संचारले आपसी कार्यहरू समावेश गर्दछ। तसर्थ, यो अनौंठो हुनेछ यदि एक सबै समय कुरा, र अन्य लगातार चुप लाग्छ।
यो शिष्टाचारको अवलोकन हो जुन रूसी भिडियो रूले च्याटलाई रमाईलो र उपयोगी बनाउँदछ। 00 00००।
भिडियो च्याट रूसी रूलेमा शिष्टाचारका प्रकारहरू
00 00 ००3 शिष्टाचार फरक हुन सक्छ। शिष्टाचारको थोक: 97 00 00००4 मा विभाजन गर्न सकिन्छ
00 00 ०77 कपडा शिष्टाचार
00 97००00 यी प्रकारका शिष्टाचारहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ जब भिडियो च्याट रूसी रूलेमा कुराकानी गर्दा। हेरौं र शिष्टाचार को हरेक प्रकार को विस्तार मा विश्लेषण।
लुगा शिष्टाचारको मतलब यो हो कि तपाइँ एक अनलाइन च्याट सत्र को दौरान तैयार हुनुपर्छ। कमसेकम उसको वार्तालापकर्ताको सम्मानका लागि। केटीहरू र महिलाहरूले नग्न स्तन र तिनीहरूका शरीरका अन्य भागहरू प्रदर्शन गर्नु हुँदैन जुन कुनै पनि हिसाबले यौन सम्पर्कमा संकेत गर्दछ।
एक मानिस लुगा लगाउन पनि राम्रो छ।यसको मतलब रूसी रूलेसँग च्याट गर्दा दुबै वार्तालापहरू लगाउनु पर्छ।
यदि हामी मेकअप शिष्टाचारको बारेमा कुरा गर्छौं भने सबै कुरा सरल छ। यदि तपाइँ मेकअपलाई धेरै चम्किलो ढ put्गले राख्नुहुन्छ भने, यसले तुरून्त सम्भावित वार्तालापकर्तालाई टाढा धकेल्न सक्दछ। वा हुनसक्छ आकर्षित गर्नुहोस्। तपाईलाई पक्का थाहा छैन। त्यसकारण, केटीहरू आफ्ना भावनाहरूमा केन्द्रित गर्न उत्तम छन्। यदि तपाईं चम्किलो मेकअपमा सहज हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मेकअप बिना सहज छ भने, त्यसोभए तपाईं यो सबै गर्न सक्नुहुन्न।
तर अझै पनि यो याद राख्नु उचित छ कि "तिनीहरू वस्त्रहरू भेटिन्छन्, तर दिमागमा हिडछन्।" पहिलो सेकेन्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब एक अन्तर्लोपकको खोजीमा। र पहिलो सेकेन्डमा तपाई उपस्थितिमा ठ्याक्कै मूल्यांकन गरिन्छ। त्यसकारण तपाईले लगाउने र मेकअप कसरी लगाउने भन्ने बारे सावधानीपूर्वक सोच्नुहोस्। र केश को बारे मा नबिर्सनुहोस्। कम्तिमा कम्बिंगले हस्तक्षेप गर्दैन।
यदि तपाईं यी प्रकारका शिष्टाचारहरू पालना गर्नुहुन्छ: लुगा, व्यवहार र श्रृ make्खलाको शिष्टाचार, त्यसपछि भिडियो च्याट रूलेटमा च्याट गर्दा निश्चित रूपमा फल लाग्नेछ: तपाईंले सुखद वार्तालापहरू पाउनुहुनेछ र सञ्चार अविस्मरणीय हुनेछ। 00 00००।
रूसी रूलेट भिडियो च्याटको आधारभूत नियम।
00 00००००3 मान्छे भिडियो च्याटमा जानको लागि केवल च्याट गर्न र कडा दिनको मेहनतको केहि अलि आराम गर्न। समान भिडियो च्याटमा, रूसी रूले विभिन्न देश, शहरहरू, बिभिन्न सामाजिक स्थिति र बिभिन्न आय स्तरका मानिसहरूलाई भेट्न सक्दछन्। यी सबै सँगै तपाईंलाई स्वतन्त्र कुरा गर्न को लागी र एकै समयमा धेरै सुखद भावनाहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिँदछ।
यो सत्य हो, मात्र भिडियो च्याट रूलेटमा व्यवहारको कडा नियमहरूको अधीनमा। आचरणका नियमहरू पनि शिष्टाचारमा समावेश छन्। तिनीहरूको अवलोकनको अर्थ यो हो कि तपाईं एक रमाईलो कुराकानी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्ना भावनाहरूको आदर गर्नुहुन्छ र आफ्नो संचार साझेदारलाई आदर गर्नुहुन्छ।
र अब हामी शिष्टाचारको मामलामा सञ्चारको सबै नियमहरू हेरौं।
यहाँ भिडियो च्याट रूसी रूलेमा कुराकानीको लागि आधारभूत नियमहरू छन्: 00 00००4
00 00००7 विनम्र हुनुहोस्
वार्तालापको भावनाहरुको सम्मान गर्नुहोस्
आफैंलाई र तपाईको भावनाहरुलाई सम्मान गर्नुहोस्।
00 0000००7 रुचिहरूको एक अन्तरवार्ता चयन गर्नुहोस्
00 00०० 97 कुराकानी जारी राख्नुहोस् 00 00 97००8
अनावश्यक र खतरनाक संचार रोक्नुहोस्
00 00००00 यी नियमहरू हुन्, यदि शिष्टाचारको भाषामा अभिव्यक्त भए। अब भिडियो च्याट रूसी रूलेटका सर्तहरूमा पनि समान नियमहरू हेरौं। तिनीहरू के भन्छन्:
तपाईं रूखो हुन सक्नुहुन्न र शपथ शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न
00 00००00 तपाईं कुनै पनि कारणको लागि व्यक्तिलाई अपमान गर्न सक्नुहुन्न: लि gender्ग, उमेर, छालाको रंग, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक दृष्टिकोण। 00 00००8
तपाइँ संचारको लागि यौन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न
तपाईं ना naked्गो फ्रेममा देखिन सक्नुहुन्न
तपाईं आफ्नो र तपाईंको अनुहारको सट्टा अन्य वस्तुहरू देखाउन सक्नुहुन्न।
यी आधारभूत नियमहरू हुन्। यदि ती कडाइका साथ अवलोकन गरियो भने, संचार, म फेरि एक पटक दोहोर्याउँदछ, मात्र सकारात्मक परिणामहरू ल्याउँछ।रूसी रूले भिडियो च्याट मोडरेटरहरू गुनासोहरू मार्फत क्रमबद्ध गर्दै दिन र रात बिताउँछन्। र प्राय जसो ती रूसी रूले भिडियो च्याट आगन्तुकहरू जसले कम्तिमा एउटा नियम उल्ल .्घन गर्दछ। यो सत्य हो कि तिनीहरू सँधै प्रतिबन्धित छैनन्, तर निश्चित समयका लागि। तर यदि गलत महान वा धेरै गम्भीर छ, तब तिनीहरू सधैंको लागि प्रतिबन्धित गर्न सकिन्छ। यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईं आफ्नै मूर्खता द्वारा रूसी रूले च्याट गर्ने अवसर गुमाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसकारण, भिडियो च्याट रूसी रूलेमा सञ्चारका नियमहरू पालना गर्न यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
यदि यो तपाईको पहिलो पटक रूसी रूले च्याट गर्दै हो भने, तपाई विश्वका सबै चीजको बारे अनौपचारिक कुराकानी सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
केही आगन्तुकहरूलाई घटनास्थलमा नेभिगेट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रायः हराइएका हुन्छन् र कुराकानी कसरी जारी गर्ने भनेर जान्दैनन्, यदि वार्तालाप मौन छ र कुराकानी जारी राख्न कुनै प्रयास गर्दैन भने।
दुई विकल्पहरू यहाँ सम्भव छ: 00 00००4
00 00००7 तपाईं अधिक सक्रिय वार्तालापको रूपमा अग्रणी प्रश्नहरू सोध्नुहोस् वा छलफलको लागि एउटा शीर्षक प्रस्ताव गर्नुहोस्।
00 00००7 तपाईंले भर्खर यो व्यक्तिलाई बन्द गर्नुभयो र अर्को खोजी गर्नुहोस्
00 00००3 भाग्यवस, भिडियो च्याट रूसी रूलेमा नयाँ इन्टरलोकटर खोजीको लागि एक हजार र एक तरिकाहरू छन्। सिद्धान्तमा, साइट रूसी रूले च्याट गर्दै भिडियो हो र संचार साझेदारको लागि अनियमित खोजीमा आधारित छ। 00 00००।
कसरी एक कूल रूसी भिडियो रूलेट कुराकानी बन्ने।
धेरै, रूसी रूले भिडियो च्याटको धेरै धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो प्रश्न सोधेका छन्। वास्तवमा, सपनामा प्रायः सबै व्यक्तिहरूले आफूलाई सफलको रूपमा हेर्दछन्। भिडियो च्याटमा सफल, यसको मतलब मिलनसार, सक्रिय, आत्मविश्वास भएको जवान मानिस छ। तर के गर्ने यदि तपाईं यति मिल्दो र पूर्ण रूपमा असुरक्षित हुनुहुन्न भने के गर्ने?
निम्न कार्यहरूले मद्दत गर्न सक्दछ: 00 00००00
00 00००00 तपाईंले अर्को व्यक्तिसँग कुरा गर्ने कुरा गर्नु अघि सोच्नुहोस्।
कुराकानी कसरी सुरु गर्ने बारे सोच्नुहोस्। सब भन्दा सामान्य भनेको "हेलो! कस्तो छ?" भन्नु हो। र यो नसोच्नुहोस् कि यो शताब्दीहरु को लागी एक वाक्यांश वाक्यांश हो। होईन। यदि तपाईं नम्रतापूर्वक र राम्रो
को साथ भन्न भने
यस वाक्यांशको अनुहारमा 00 00००० expression अभिव्यक्ति, त्यसपछि 85 85% कुराकानी जारी रहनेछ। 00 00००8
को पोशाक तपाईलाई कृपया। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफ्नो पोशाकमा लगाउन सक्नुहुन्छ वा आफैंलाई दु: ख नदिनुहोस्। नaked्गो धड धेरैलाई भ्रामक चीजको लागि गलत हुन सक्छ र कुराकानी पनि सुरु गर्दैन। तर टि-शर्ट र जीन्सले पहिले नै सहानुभूति पैदा गर्दछ र कुराकानी जारी राख्नका लागि अवसर हुनेछ। हो, भिडियो च्याट मा एक कडा सूट बेकार छ। 00 00००8
00 00 ०००7 तपाईंको कपालमा क to्गाउन उत्तम छ। कसले अप्ठ्यारो मान्छेसँग कुरा गर्न चाहन्छ? 00 00००8
00 00 ०007 मुस्कान। मुस्कुराउनुहोस्, तर हाँस्नुहोस्। अन्यथा, तिनीहरूले सोच्न सक्दछन् कि तपाई जससँग कुरा गरिरहनु भएको छ उसलाई हाँस्दै हुनुहुन्छ। र यसले "अर्को" बटन क्लिक गर्ने इच्छालाई निम्त्याउन सक्छ। 00 00००8
00 00००3 र सामान्य रूपमा, भिडियो च्याटमा सबै कुरा सामान्य व्यक्तिहरू हुन्, आफ्नै कथा र प्रभावहरूसँग सम्झनुहोस्। र धेरै धेरै व्यक्तिहरू पहिलो पटकको लागि राम्रोसँग कुराकानी गर्दछन्।तपाईं यहाँ पहिलो पटक हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार्न पनि यो लायक हुन सक्छ।
रूसी रूलेसँग च्याट गर्ने क्रममा के बेवास्ता गर्ने भनेर फेरि एकपटक सम्झौं:
00 00 ०77 रुखो
00 00००7 चर्को आवाज
,,, ००० कुराकानीका लागि शीर्षकहरू कलिंग गर्दै
,,, ००० नग्न शरीरका अंगहरू
फ्रेम मा अन्य वस्तुहरूको अनुहारको सट्टा देखा पर्दछ
00 00 ०००3 र हामी च्याट रूसी रूलेमा कुराकानी गर्ने प्रक्रियामा के हुनुपर्दछ याद गर्नुहोस्: 00 97 ०००00
,,, ००० सकारात्मक भावनाहरू
कुराकानी जारी गर्न म्युचुअल सहमति
00 00००00 यदि अचानक यस्तो भयो भने तपाईं रूसी रूले भिडियो च्याटमा जानुभयो, तर तपाईं प a्क्तिमा धेरै पटक स्विच हुनुभयो भने निराश नहुनुहोस्। यस्तो हुन सक्छ कि मानिसहरूले कुरा गर्न अन्य व्यक्ति खोजिरहेका छन्। हराउने छैन र तपाइँको वार्तालाप को लागी खोजी गर्न जारी राख्नुहोस्। पाँच मिनेट भन्दा कममा, ऊ भेटिनेछ। र एक मीठो र रमाईलो कुराकानी शुरू हुनेछ। 00 00००।